JONGA IIFOTO ZECHRISSY TEIGEN'S SWEET BABY BUMP UKUZA KUTHI GA NGOKU - IINDABA
Jonga iifoto zeChrissy Teigen's Sweet Baby Bump ukuza kuthi ga ngoku
Xa kubandakanya amakhaya amahle aseHollywood, UChrissy Teigen , umyeni wakhe, UJohn Legend , kunye nabantwana babo, uLuna kunye noMiles, ngokungathandabuzekiyo baphakame irekhodi! Inxalenye engcono?Bafumana isongezo esitsha kraca. Inkqubo ye- Iminqweno Umdali ukhulelwe kwaye ulindele umntwana onguNombolo.
Iindleko zesine zeeyure zikaJulayi
Ewe ulwazi olunjalo luyolo enkulu isibhengezo. Endaweni yokuthumela ngokungakhathali kwi-Instagram okanye kwi-Twitter, uChrissy noJohn bazimisele ukusebenzisa ividiyo yomculo weWild ophumeleleyo we-EGOT ukuchitha iimbotyi.Kwi-tailend yevidiyo, abalandeli babona uJohn ebeka isisu sikaChrissy kuba esi sibini savela elwandle. Ngokuqhelekileyo, ababukeli babeneentsana engqondweni!
Iiyure nje kamva, eyangaphambili Imidlalo eboniswe I-mannequin iqinisekisile i-hypothesis kwi-Instagram. Jonga lo mntwana wesithathu. Yintoni u… oh Thixo wam, uChrissy wahleka njengokuba wayeqhayisa ngesisu esasiphuma. Kwimeko yokupapasha, owomthonyama u-Utah wayenxibe iblazer yeklasi emnyama kunye neebhola ezimnandi.
Kule minyaka idlulileyo, uChrissy ngalo lonke ixesha ebesiza kakhulu malunga nokuba ngumama. Enyanisweni, ngoJulayi 2019, Yiza noLonwabo Umninimzi wafundisa omnye wabalandeli bakhe ukuba ukhulelwe.
Ndiyazi ukuba khange uthethe ngokungabi nantlonelo nangona kunjalo thatha kabini malunga nokubuza le nto, waqala uChrissy. Kukho abantu abasokolayo ukukhulelwa kwaye kubuhlungu maxesha onke. Andimithanga kodwa bendinokukhululeka ukuba bendinokuba ... kodwa ndikhululekile ukuba ndingabikho!
UJohn noChrissy basebenzise i-IVF (in vitro fertilization) ukukhulelwa nganye iLuna kunye neMiles. Ngelixa iifayile ze Umlo wokuvumelanisa imilebe Umntu kufuneka abhengeze ukuba usebenzise i-IVF yomntwana hayi. 3, uChrissy ngaphambili wathetha ngokukhulelwa ngokwendalo.
Kuya kuba ngaphezulu, wayalela Abantu kwi-2018. Ndibalasele ngokungenzekanga ngenxa yokuba bendiyilungele indawo ebesikuyo ukuyilawula - ixesha kunye nokucwangciswa. Isenokuba sisiphithiphithi nakweyiphi na imeko - nangona kunjalo ndiyazithanda iziphithiphithi, nazo.
Sihlala silandela uhambo lokukhulelwa lukaChrissy ngokukhawuleza! Ukubona iifoto zomntwana wakhe zingqubeka ukuza kuthi ga ngoku, skrolela ngendlela yegalari engezantsi.
Izigaba: Iindaba Hollywood Amazon-Prime
Ngumdokotela ogqirha weplastiki oxabisekileyo
yizise kwisikolo esiphakamileyo
extratorrent.com ukhuphelo lwasimahla lwemovie